Dhismaha Ka Fiican: Dhismooyinka Waxqabadka Sare ee Qoysaska Badan - Xarunta EcoTechnology
Xagga sare waa sawirka 'Lumberyard' - dhisme guryo la awoodi karo oo ku yaal bartamaha Northampton, Massachusetts. Jaleecada hore, waxay umuuqan kartaa dhisme cusub oo dabaq ah, laakiin dhismahan waa mid awood badan leh oo dhisma badan qoysaska ah. Waxtarka Lumberyard waxaa lagu cabiray iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Qiimeynta Tamarta Guriga (HERS), oo ah nidaam qaran ahaan la aqoonsan yahay oo lagu cabiro laguna xisaabiyo waxqabadka tamarta ee dhismaha. Dabaqyada koowaad iyo afraad ee Lumberyard-ka waxay heleen dhibcaha HERS ee 39 halka dabaqyada labaad iyo saddexaad ay heleen dhibco dhan 40. Si taas loo eego, guri cusub oo caadi ah oo loo dhisay lambar ayaa sida caadiga ah la siiyaa dhibco 100.
Hoos udhaca dhibcaha HERS, ayaa si aad ah u tamar badan dhisme. Sidaa darteed, dhismo leh dhibco 40 ayaa 60% ka tamar badan tamarta badan guryaha cusub ee caadiga ah! Si loo kordhiyo waxtarka dhismaha loona yareeyo dhibcaha HERS, dhise ayaa rakibi kara nidaamyada nalalka tamarta kuleylka leh iyo kuleylka, hawo qaadashada, iyo qalabka qaboojinta. Dhismo qoysas badan ka kooban, oo sida caadiga ah loogu tixgeliyo Massachusetts inuu yahay dhismo ka kooban in ka badan 5 cutub, oo leh dhibco HERS ah oo hooseeya sida loo yaqaan 'The Lumberyard's' ayaa si ballaadhan loogu qeexi karaa inuu yahay waxqabadka sare.
Dhismayaasha waxqabadka sare ee qoysaska badankood waxay soo bandhigaan caqabado gaar ah marka loo eego dhismooyinka waxqabadka sare ee qoys keliya. Waxaa jira caadiyan dhismeyaal badan, injineero, horumariyayaal, iyo maalgashadayaal ku lug leh mashaariicda qoysaska badan, oo u baahan in khadadka wanaagsan ee wada xiriirka la dhiso bilowgiiba. Marka howsha dhismuhu bilaabato, iskaashiga u dhexeeya kooxaha kala duwan ee dadka ayaa lagama maarmaan u ah in si taxaddar leh loo qorsheeyo isku-dhafka nidaamyada farsamooyinka hufan. Mark Newey, oo ah mid ka mid ah seddexda HERS ee wax ka qora Xarunta Dhismaha Waxqabadka Sare ee EcoTechnology, ayaa sheegay in "ay muhiim tahay in la qabto wixii arrimo ah ee ku jira qorshooyinka ka hor intaan dhismaha la bilaabin tan iyo markii wax walba laga tuuray dukumiintiyada dhismaha." Dhanka kale, oo leh guryo hal qoys leh, way fududahay in la xaliyo wixii dhibaato ah markay soo if baxaan. John Saveson, oo ah shaqsi kale oo u yaqaan HERS oo ka tirsan kooxda waxqabadka sare ee CET, ayaa ku raacsan Newey, isaga oo leh "dhismayaasha qoysaska badankood waxay leeyihiin nidaamyo farsamo oo adag oo udub dhexaad u ah kuwaas oo caqabad ku ah qaabeynta iyo tijaabinta
Casey Simpson (bidix) iyo Mark Newey (midig) oo ku qaadaya tijaabo albaabka afuufka dhismaha.
In kasta oo ay jiraan caqabadaha mashaariicda qoysaska badan u soo bandhigaan kuwa wax dhisaya iyo kuwa u ololeeya HERS, dhismayaasha qoysaska badan ayaa si aad ah caan ugu noqday maaddaama magaalooyinku noqdeen kuwo cufan oo kiraystayaashu ay raadsadaan ikhtiyaarro guryo la awoodi karo Golaha Gurisiinta Qoysaska Badan (NMHC) wuxuu leeyahay a Qalabka Awoodda Kireynta Guryaha taas oo ay ka mid tahay a Faa'iidooyinka Qoysaska badan qaybta. NMHC waxay iftiimineysaa faa iidooyinka deegaanka ee dhismayaasha qoysaska badan, iyagoo sheegaya in xoojinta tamarta ee dhisida qeyb shaqsi ay si aad ah u hooseyso isla markaana loo baahan yahay tamar yar si loo ilaaliyo unugyada shaqsiyeed waqtiga. Maaddaama baahida loo qabo dhismayaasha qoysaska badan ay kordhayaan, kuwa wax dhisa qaarkood waxay ku darayaan heerarka dhismaha waxqabad sare si ay u kordhiyaan faa'iidooyinkan.
Leyden Woods Guri La Awoodi Karo, ENERGY STAR-la xaqiijiyay. The Community Builders, Inc. Greenfield, MA.
Newey waxay dhowaan heshiis la gashay Dooxada Horumarinta Bulshada Dooxada (Valley CDC) oo loogu talagalay mashruuc ka kooban 28 qaybood oo ku dadaalaya sidii loo heli lahaa shahaado aqlabiyad ah. Ujeedada Aqalka Hoose waa in laga dhigo kuleylka caadiga ah, hawo-qaadashada, iyo qalabka qaboojiyaha inay duugoobaan iyadoo la dhisayo dhismo u baahan doona tamar ugu yar si loo gaaro heer kul wanaagsan sanadka oo dhan. Kooxda Dhisida Waxqabadka Sare ee CET waxay kaqeyb qaadan doonaan talaabo kasta oo wadada socota, laga bilaabo baaritaanka ogaanshaha iyo farsamada ilaa nidaamka cadeynta. Newey wuxuu sheegayaa inuu si gaar ah ugu faraxsan yahay mashruucan maxaa yeelay, intuu la shaqeynayay Valley CDC sanadihii la soo dhaafay, tani waa mashruucii ugu horreeyay ee Guryaha Dadban ee uu kala soo shaqeeyay iyaga. Newey mar hore ayey ku soo booday hawsha waxayna ka shaqeyneysaa Daraasada Suurtagalnimada Aqlaaqda Guriga si loo go'aamiyo xaddiga dahaadhka iyo heerka waxtarka astaamaha kale ee dhismuhu u baahan doono inuu la kulmo heerarka shahaado ee Passive House.
Si aad wax dheeraad ah uga ogaato adeegyada waxqabadka sare ee CET iyo mashaariicda, riix halkan!